အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကြောက်စိတ်တွေ ကျုပ်တို့မှာ တစ်ဖြေးဖြေး ကုန်ခမ်းလာပြီ
OIC ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် »
၁။ လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာယူဆနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌ မိမိကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ သို့မဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့် ပါဝင်သည့်အပြင် မိမိ တစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသူများနှင့်စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူလူထု အများရှေ့မှောက်တွင် မဟုတ်ဘဲဖြစ်စေ မိမိတို့ကိုးကွယ်သောဘာသာ သို့မဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြနိုင်ခွင့်၊ ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်၊ ဘုရားကျောင်းကန်သွားလာဝတ်ပြုနိုင်ခွင့် နှင့် ဆောက်တည်နိုင်ခွင့်တို့လည်း ပါဝင်သည်။
၂။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မိမိရွေးချယ် ကိုးကွယ်သောဘာသာ သို့တည်းမဟုတ် ယုံကြည်မှု ပျက်စီးစေရန် တိုက်တွန်းခြင်း မပြုနိုင်။
၃။ ပြည်သူ့လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် ပြည်သူ့လုပ်ငန်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်တရား သို့မဟုတ် လူအများ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေးတို့ကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှအပ ကာကွယ်ရန်မှတစ်ပါး ဘာသာ သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုကို သွန်သင်ပြသရန် လွတ်လပ်ခွင့်အား ချုပ်ခြယ်ခြင်း မပြုရ။
၄။ လက်ရှိသဘောတူစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့၏အာဏာပိုင်တို့သည် မိဘတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သော ကျင့်ဝတ် အရသော် လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအရသော် လည်းကောင်း မိမိတို့၏သားသမီးများအား တညီတညွတ်တည်း ပညာပေးဆုံးမမှု အားလုံးတို့ကို တတ်နိုင်သရွေ့ စောင့်ရှောက် ကာကွယ်အာမခံပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
လူတိုင်းတွင် မိမိသဘောအရ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိသည်။ ၄င်းသည် မရုပ်သိမ်းနိုင်သော အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ ဆိုင်းငံြ့ခင်း မပြုနိုင်။
ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှု စသည်တို့အပေါ်အခြေခံ၍ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် သည်းမခံမှုများ၊ ဖိနှိပ် ခွဲခြားမှုများနှင့် ပတ်သက်သော ကြေညာစာတမ်း (The Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief)
— လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှု၊ လွတ်လပ်စွာခံယူကြံဆမှု သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုနှင့်ကိုးကွယ်မှု စသည်တို့ကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်စော်ကားခြင်းသည် လူသားများကို ဒုက္ခ များစွာပေးသော စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုကို တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းသည် ခွင့်ပြု လက်ခံနိုင်သောအရာ မဟုတ်။
— လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှု ၊ယုံကြည်မှု စသည့်အခွင့်အရေးတို့ကို လေးစားရန်၊ သည်းခံရန် နှင့် နားလည်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ရန်လိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ ချာတာ စာချုပ်ကြီးပါ မူတို့နှင့် မကိုက်ညီမှုများကို အဆုံးသတ်ရန် သေချာစေရမည်ဖြစ်သည်။ [ အဖွင့်စကားချီး ]
ကြေညာစာတမ်း၏အပိုဒ် ၁၈ ပါအခွင့်အရေးများထံတွင် အောက်ပါအခွင့်အရေးများ ပါဝင်သည်။
* ပြည်သူအများစုပေါင်းဝတ်ပြုခွင့် နှင့် ယင်းဝတ်ပြုရန်နေရာများ သတ်မှတ်စေရန်
* ကုသိုလ်ပြုအသင်းအဖွဲ့များကို တည်ထောင်နိုင်ရန်
* စေတနာအရအလှူများကို လက်ခံခြင်းနှင့်ရှာဖွေနိုင်ရန်
* ဆီလျော်သင့်တော်သောစာပေများကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်ရန်
* သင့်လျော်ရာနေရာဒေသတို့တွင် ဘာသာရေးနှင့် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ပညာပေး၊ ပညာပြန့်ပွားရေးအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
* ယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်များကို ဆင်နွှဲကျင်းပနိုင်ရန်
* ဘာသာရေးနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက်၊ လိုအပ်သောပြည်တွင်းပြည်ပဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
ကန့်သတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းရမည်။
* ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းရန်
* ပြည်သူ့လုံခြုံမှု၊ လုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးတို့ကို ကာကွယ်ပေးရန်
* သည်းမခံနိုင်မှုနှင့်ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုသော အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်ခြင်း နှင့် မျက်နှာသာပေးမှုများ မပါဝင်စေရန်တို့ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအစိ်ုးရများသည် သည်းမခံနိုင်ဖွယ်ရာများကိုလည်းကောင်း၊ ခွဲခြားမှုများကိုလည်းကောင်း ရပ်တန့်စေရန်အတွက် (နှင့်) ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းရာတွင် ထိရောက်သောဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ကလေးသူငယ်များကို မိမိတို့၏မိဘများနှင့် အုပ်ထိန်းသူတို့ ကိုးကွယ်နှစ်သက်သော ဘာသာတရား၏ သွန်သင်ဆုံးမချက်များတွင်သာ ပျော်မွေ့စေရမည်။ မိဘသားသမီး အားလုံးနှင့် လူသားအားလုံးတွင် နားလည်မှု နှင့် ခန္တီပါရမီ စသည့် မွန်မြတ်သော စိတ်ထား ပွားများပြီး သူတစ်ပါး၏ သာသနာနှင့် ယုံကြည်မှုတို့၏ လွတ်လပ်မှုများကို လေးစားကာ မိဿဟာရ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေရမည်။
လူတိုင်းသည် ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် အညီအမျှဖြစ်ပြီး မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤကဲ့သို့ပင် အသားအရောင်၊ လိင်၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အခြားအယူအဆ၊ အမျိုးသားဇာစ်မြစ် သို့မဟုတ် လူမှုရေးဇာစ်မြစ်၊ ဥစ္စာဓန၊ မျိုးရိုးဇာတိ နှင့် အခြားအဆင့်အတန်းခြားနားခြင်းရှိသော လူတို့ကို အစိုးရက တူညီစွာ နှင့် ထိရောက်စွာ အာမခံပေးလျက် ကာကွယ်ပေးရသည်။
လူတိုင်းသည် ခွဲခြားမှုများတို့မှ အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့် ရှိသည်
ဤအပိုဒ်တွင် မည်သည့်လူတန်းစားကိုမဆို အထူးမျက်နှာသာပေးမှုကို တားမြစ်သည်။ အပိုဒ် ၂ အရ တရားဝင်အာမခံချက်များအပေါ် ထပ်ဆင့် ကတိပေးရေးသားထားသည်။
“ အသားအရောင်၊ လိင်၊ လူတိုင်း၊ လူမျိုး၊ မျိုးနွယ် စသည်ဖြင့် သူ့ထက်ငါ ကောင်း၊ဆိုးသည်ဟူသော အတွေးအမြင် ထင်မြင်ယူဆမှုများမှ တဆင့် အုပ်စု၊ အတန်းအစား၊ အလွှာအသီးသီးတို့ကြောင့် ခွဲခြားခြင်း ပေါ်ပေါက်လာရပေသည် ” [ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီး ]
၁၉၇၈ ခုနှစ် လူမျိုး နှင့် မျိုးနွယ်စွဲလန်းမှု အပေါ်ပတ်သက်သည့် ကြေညာစာတမ်း
လူတစ်မျုိုးကို တစ်မျိုးထက်တစ်မျိုး နိမ့်မြင့်သည်ဟူ၍ ခွဲခြားရန်အတွက် လူမျိုးကွဲပြားမှုအပေါ် အကြောင်းပြ၍ မရနိုင်။
– လူမျိုး သို့မဟုတ် မျိုးစု မျိုးနွယ်တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး မွေးရာပါဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့် နိမ့်မြင့်၊ ကြီးငယ်၊ ယုတ်ညံ့သည်၊ မွန်မြတ်သည် ဟူသောအဆိုတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသည့် မည်သည့်ဝါဒသဘောတရားမျှမဆို အခြေခံသိပ္ပံပညာနှင့်လည်းကောင်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ်တရားနှင့် လူသားဝါဒဥပဒေမူနှင့် လည်းကောင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်။
-သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် မတူညီသော အာဏာ၏နောက်ဆက်တွဲ အားပေးမှုအဖြစ် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အမျိုး၊ အလွှာ စသည့် ကွာခြားခြင်းနှင့် ကွာဟမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော လူမျိုးရေးစွဲလန်းမှု(ဘက်လိုက်လိုမှု) တို့သည် လုံးလုံးလျားလျား မှားယွင်းလေပြီ။ [ အပိုဒ် ၂ ]
လူမျိုး သို့မဟုတ် မျိုးနွယ်တစ်စုသည် အခြားသောလူမျိုး သို့မဟုတ် မျိုးနွယ်တစ်စုထက် ပို၍မြင့်မြတ်သည်ဟူသော အဆိုသည် အခြေအမြစ်မရှိသလို လူမျိုးရေးစွဲလန်းမှုသည်လည်း မှန်ကန်သော သဘောမရှိ။
လူမျုိုးစု၊ ဘာသာအယူအဆ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားအားဖြင့် ကွဲပြားကြပြီး လူနည်းစုများနေထိုင်သောတိုင်းပြည်များတွင် အခြားလူနည်းစု သို့မဟုတ် မျုိုးနွယ်စုတစ်ခုနှင့်အတူ လူနည်းစုတစ်စုက မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအရဖြစ်စေ၊ ဘာသာ စကားဖြစ်စေ၊ ဘာသာ အယူအဆဖြစ်စေ လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံးဟောပြော သွန်သင်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခြင်း မပြုနိုင်။
* လူနည်းစုများတွင် မိမိတို့၏လူမျိုးစုတစ်စုတည်းအဖြစ်ရှိနေရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် လူနည်းစုများသည် လုံခြုံရာမဲ့သောအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပြီး အထူးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုကို လိုအပ်သည်။ ထို့အတွက် လူနည်းစုကိုအထူး ရည်ရွယ်သော သဘောတူညီချက်များစွာတို့ ပေါ်ပေါက်အသက်ဝင်လာခဲ့ရသည်။
၁။ မျိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် – Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (GC)
“ ပြဿနာအားလုံးလိုလိုတွင် လူနည်းစုများသည် သဘာဝအားဖြင့် မျိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှု၏ဓားစာခံများ ဖြစ်ရသည် ”
[ လူနည်းစုအခွင့်အရေးအုပ်စု ]
မျိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စာချုပ် GC တွင် မျိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို
– ပြည်သူလူထုကို သတ်ဖြတ်ခြင်း
– ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်ကာယအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်းကောင်း အနာတရာထိခိုက်စေခြင်း
– ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတို့အား ကိုယ်ကာယ(ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ)ပျက်စီးစေရန် တမင်သက်သက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
– မွေးဖွားမှုကို တားမြစ်ခြင်း နှင့်
– ကလေးသူငယ်များကို ရွှေ့ပြောင်းပစ်ခြင်း
စသည်ဖြင့် လူမျိုးတစ်မျိုး၊ လူမျိုးစုတစ်စု၊ ဘာသာရေးအုပ်စုတစ်စုတို့ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖျက်ဆိးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော ထိုပြဿနာမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်စေရန် နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်များသည် ကုလသမဂ္ဂကို အကူအညီတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၂။ ပညာရေးအပေါ် ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ် – Convention against Discrimination in Education
ပညာရေးအပေါ်ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာပဋိညာဉ်သည် လူနည်းစုတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့် မိမိတို့၏ပညာရေး ရယူသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်သည်။
၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနည်းမျိုးစုံအား ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် – International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု နည်းမျိုးစုံအား ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် မျိုးနွယ်အုပ်စုများတို့၏ တိုးတက်မှုကို အာမခံချက်ပေးနိုင်သော ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ် ကူညီအားပေးသည်။
၄။ လွတ်လပ်ရေးရသော တိုင်းပြည်များရှိ ဒေသခံနှင့် တောင်တန်းဒေသ လူမျိုးများနှင့် ဆိုင်သော ပဋိညာဉ် – Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (IL0 169)
တောင်တန်းဒေသရှိလူမျိုး ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း မိမိတို့၏ဥပဒေ၊ ဓလေ့ထုံးစံ နှင့် ဘာသာစကားတို့မှာ နိုင်ငံတော်၏ အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကွာခြားသည်။ သို့ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏မူအရ ၄င်းတို့၌ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း ခွင့်မရှိဟု ဤစာချုပ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
မူရင်းဌာနေလူမျိုးစု ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသား အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိ လူတစ်စုဖြစ်ပြီး
– ယင်းနိုင်ငံ၏နယ်ပယ်သို့ ကျူးကျော်သူများ မရောက်လာခင်ကတည်းက ထိုဒေသတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသူ
– မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ကျူးကျော်မှုမတိုင်မီလူမျိုး သို့မဟုတ် ကိုလိုနီမတိုင်မီလူမျိုးအနေဖြင့်သာ ခံယူသူ
– မည်သူ၏ကြီးစိုးမှုမျှမခံသော လူမျိုးများဟုခံယူသူ
– မိမိယဉ်ကျေးမှုပုံစံ၊ မိမိ၏လူမှုရေးရာဥပဒေ၊ တရားဥပဒေကျင့်ထုံးများကို ထိန်းသိမ်းပြီး အနာဂတ်၌ ထိုကဲ့သို့ပင် လူမျိုးစုတစ်မျိုးအနေနှင့် ဆက်လက်၍ သီးသန့်ပိုင်နက်အတွင်း နေထိုင်သွားနိုင်ရန် လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သူ ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဌာနေဒေသခံလူမျိုးတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများသည် မြေယာပဋိပက္ခကို အခြေခံသည်။ ဘိုးဘွားအမွေမြေယာများ လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ အစဉ်အလာပိုင်ဖြစ်သော သယံဇာတများ ဆုံးရှုံးမှုတို့ကြောင့် ဒေသခံလူမျိုးတို့သည် စီးပွားရေးပျက်သုဉ်းခြင်း၊ ၄င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ၏ အနာဂတ်ရေးအား ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားခြင်း စသည့် မလွှဲမရှောင်နိုင်သော အကျိုးဆက်များနှင့်ကြုံတွေ့လာရတော့သည်။ [ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်ရှင်ရေးအဖွဲ့ ]
IL0 169 သည်
– တောင်တန်းဒေသလူမျိုးများ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရန်
– မိမိတို့၏သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်း ကာကွယ်ရန်
– ပြည်သူများကို အဓမ္မပြောင်းရွှေ့စေခြင်းမှ တားမြစ်ရန်
– ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရေးကိစ္စအတွက် လိုအပ်ချက်များပေးရန်
– ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အပြစ်ဒဏ်ပေးရန်တို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
၅။ တိုင်းရင်းသား သို့မဟုတ် လူမျုိုးစု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ နှင့် ဘာသာစကားကွဲပြားသော လူနည်းစုများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း – Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. 1992
– မိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကို ကျေနပ်စွာခံစားရန်
– မိမိတို့၏ဘာသာယုံကြည်မှုကို ကျင့်သုံးသွန်သင်ဆုံးမရန်
– မိမိတို့ဘာသာစကားကို အသုံးပြုရန်
– မိမိဖာသာအနေနှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုအနေနှင့်လည်းကောင်း လွတ်လပ်စွာနေပြီး ၄င်းအပေါ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ခွဲခြားမှုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေးစေရန်
– မိမိတို့၏လူနည်းစုအရေးနှင့်ဆိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဒေသအနေနှင်ဖြစ်စေ ပါဝင်ရန် စသည့်အခွင့်အရေးများကို ပဓာနပြုသည်။
– ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် ခွဲခြားမှု မရှိ၊ တူညီသောအခွင့်အရေးဖြင့် ၄င်းတို့၏လူ့အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးနိုင်သော အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ပေးရန်
– နိုင်ငံတော်ဥပဒေနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းကို ချိုးဖောက်ရသော လုပ်ရပ်များမှလွဲ၍ လူနည်းစုတို့၏ အခြားသော ယဉ်ကျေးမှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန်
– ၄င်းတို့၏တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို ကောင်းမွန်သော အခွင့်အရေးရရှိရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများချမှတ်ရန်
– နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အတွင်းရှိသော လူနည်းစုတို့၏ သမိုင်း၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများကို ဆည်းပူးလေ့လာရန် အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးရန်
– နိုင်ငံတော်၏ကြီးပွား တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင် ၄င်းလူနည်းစုတို့ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားရန်
စသည့် အချက်များပေါ်တွင် တာဝန်ရှိသည်။
၆။ ဗီယင်နာ ကြေညာစာတမ်း
အစိုးရတို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ တူညီသောအခြေခံမူ နှင့် ဒေသခံပြည်သူတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးများ အားလုံးနှင့်အခြေခံ လွတ်လပ်မှုများကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လေးစားရန်အတွက် ဟန်ချက်ညီညီ အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စီစဉ်ချမှတ်ပြီး၊ ၄င်းတို့၏ ကွဲပြားခြားနား၍သီးခြားဖြစ်လျက်ရှိသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တန်ဖိုးကို လေးစားရမည်။ [ အပိုဒ် ၂၀ ]
၇။ နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုများအခွင့်အရေး ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ် – International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. 1990
ဤစာချုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ICCPR တွင် ပါဝင်သော အခွင့်အရေးများအနက် အောက်ပါ အခွင့်အရေးများကို ထပ်မံ ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့မှာ
– ပြည်သူများကို တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်းအား ကာကွယ်မှု
– လူမျိုးစုခွဲခြားခြင်း မရှိဘဲ တန်းတူညီမျှ ရှိစေမှု၊ အထူးသဖြင့် လစာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများတွင် တန်းတူညီတူရှိမှု၊
– ၀င်ငွေနှင့်စုငွေများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပေးပို့လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်မှု
– ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုသီးခြားရှိနေရေးကိုလေးစားမှု
ဤသဘောတူစာချုပ်သည် လုံလောက်သောတိုင်းပြည်များ၏အတည်ပြုမှု မရရှိသေးသောကြောင့် လောလောဆယ်အားဖြင့် အာဏာသက်ရောက်ခြင်း မရှိသေးပေ။ (ယခုအခါ အတည်ပြုအင်အားများပြားလာပြီး အာဏာသက်ရောက်လုပြီဖြစ်သည်)
The Human Rights Handbook (Kathryn English & Adam Stapleton)အား မြန်မာပြန်ဆိုထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူ့အခွင့်အရေး လက်စွဲစာအုပ်(စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၀) မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။
Tags: Analytical, Chemistry, Gas Chromatography, George Cross, Grand Champion, History, Jericho, Separations Science
This entry was posted on November 16, 2013 at 1:43 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.